avo aryry tokana Light miaraka fanaryratako System mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > avo andry tokana Lighting Pole > avo andry tokana Lighting pole miaraka fanandratako System > avo andry tokana Light miaraka fanandratako System
Ao amin'ny lava-kaontin-kase ao amin'ny farany ambany amin'ny jiro miakatra avo be, ny rafitra mitsangana toy ny motera iray dia apetraka ho fanampin'ny rafi-pahefana elektrika. Ny rafi-pitantanana herinaratra dia napetraka ao anaty tsanganana mba hialana amin'ny tsy fahombiazan'ny fihetsiketsehana manetriketrika vokatry ny tontolo iainana ivelany. Omena ao amin'ny rafitra fanaraha-maso elektrika ny fitaovana isan-karazany fiarovana.
Ireo mpihetsika ny fizakan-drindrina ao anaty rafitra dia feno rindrina varahina betsaka mba hiantohana ny fifandraisana elektrika tsara. Ny rafi-javamananton'ny jiro miakatra avo dia avo ka manondraka sy manondraka ny takelaka jiro amin'ny alàlan'ny motera elektrika iray (karazana elektrika elektrika), ny fanodinana fitaovam-pandehan'ny olitra, ny fanamafisana fiarovana, ny tady tariby lehibe iray, ny tady tariby faharoa. fehezin-tariby ary sakelin'ny takela iray novaina. Ny reducer gear goavambe dia manana fahaiza-mihidy mahery, fifindrana mihetsika ary ny fifindrana lehibe. Mba hampihenana ny fihenan'ny kankana sy ny gazy goavambe ary hampihenana ny fiakaran'ny fiakarana, dia misy kofehy mifindra miampy hampihenana ny hafainganam-pandeha amin'ny takelaka jiro latsaky ny 0.2 m / s. .
Ny tariby tariby lehibe dia mifamatotra amin'ny tariby tariby ny jiro amin'ny alàlan'ny misaraka amin'ny tariby mba hialana amin'ny fidiran'ny tariby faharoa noho ny fanitarana ny tariby lehibe. Ny tady tariby an-tariby lehibe sy mpanampy dia vita amina tariby vita amin'ny vy matevina sy fiadiana 6 * 19 tsy mihetsika. Ny sakana vita amin'ny bolley dia misitraka ny bracket vy miendrika hafanana, ny vy vita amin'ny vy tsy mihetsika ary ny varahina halimo mba hiantohana ny fandanjalanja amin'ny alàlan'ny toe-javatra mahazatra.
Mpanasa lamba haingana, kozatra ary faritra hafa koa alefa mafana na vy tsy mihetsika. Misy 6 andiana baoritra vita amin'ny halavirana ary misy marika fampitaovana telo na mihoatra amin'ny takelaka jiro. Ny kodiarana mitarika 120 degre dia mizara manaraka ny velaran'ny jiro mandritra ny fanakarana na ny fampidinana ilay kapila jiro mba hahazoana antoka fa tsy hihetsika ny jiro. Ny velaran'ny faritra miasa amin'ny kodiaran-jiro izay mifandray amin'ny alàlan'ny poste jiro dia iharan'ny fatorana thermocompression goma. Mba hahazoana antoka tsara ny fijanonana mandeha ho azy rehefa tonga eo amin'ny toeran'ny fetra ny takelaka jiro, ny takelaka jiro dia ahitana fantsom-pitokisana azo itokisana miaraka amin'ny fiakarana miakatra sy hianjera, ary manana fiarovana fiarovana.
Ny fitrandrahana ny takelaka hazavana avo lenta dia azo amin'ny alàlan'ny fanovana ny lalan'ny fihodinan'ny môtô. Ho an'ny fiarovana sy ny filaminana, ny lavaka mahitsizoro dia misy varavarana voahisy, ary ny varavarana tombo-kase dia miaraka amin'ny varavarana hidy manokana.
Hot Tags: avo andry tokana Light miaraka fanandratako System, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style